Uhlalutyo lohlalutyo lwe-crucible yodongwe kushishino lwezemigodi | XTL
Ekhaya > Iimveliso > Fire Assay Crucible
I-Fire Assay Refractory Clay Crucible isetyenziswa ikakhulu kuhlalutyo lweesampulu zesinyithi kunye neesampulu zokunyibilika kwiilebhu, iilebhu zezimbiwa kunye neelebhu ezahlukeneyo zoshishino.
Udongwe lweCrucible---Assay Crucible
Iisampuli kunye nezithako zifakwe kwi-crucible, kwaye uvavanyo lokunyibilika lwenziwa kwiqondo lokushisa eliphezulu. Iqhosha lokukhokela elifunyenwe yimvula yolwelo emva koko lixhomekeke kumfuniselo olandelayo;
Ukusebenzisa izixhobo ezikumgangatho ophezulu, ukuxhathisa ubushushu obuphezulu, ukuhanjiswa kakuhle kwe-thermal, ukucoceka okunyibilika okuphezulu, ukuxhathisa okuqinileyo kwe-corrosion kunye nobomi benkonzo ende.
Iimpawu: I-refractoriness ephezulu, akukho slag, akukho kungena, akukho kuphazamiseka, sisixhobo esincedisayo seklasi yokuqala yokuvavanya umlilo.
I-crucible yokuvavanya umlilo yanamhlanje ayikude kangako kwezo zangaphambili ngaphandle kwenzululwazi eyongezelelweyo emva kokwakhiwa kwayo. Izikhonkwane zale mihla zenzelwe ukusetyenziswa elabhoratri endaweni yokusulungekiswa kwaye ke kufuneka zibe ngqongqo kwiinkcukacha zazo. Ukongeza, kufuneka bomelele ngokwaneleyo ukumelana notshintsho olukhulu lobushushu ngokusetyenziswa okuninzi.
I-crucible isetyenziselwa inxalenye yokuqala yenkqubo yokudibanisa umlilo. Le nkqubo ilandelayo iqhelekile:
· I-Flux kunye nesampuli zongezwa kwi-crucible
· Izongezo ezingentla zixutywe kunye ngaphakathi
· Ubushushu busetyenziswa kwi-crucible kunye nomxube ngokubeka imbiza kwiziko kwi> 1000oC
· Emva kwexesha elimiselweyo, i-crucible iyasuswa kwaye iziqulatho ezityhidiweyo zigalelwe kwi-mold yentsimbi.
· I-crucible ipholile kwaye ilungele ukusetyenziswa okulandelayo, nangona kunjalo, inokulahlwa ukuba isampuli yangaphambili iqulethe izixa eziphezulu zegolide.
Ubungakanani betyala lomthi (mm)